Iqembu leHighlanders Libanjwe Xhaka Ngele Triangle
Mbimbitho 30, 2018
Iqembu leHighlanders libe ngutshiki lobhanqa leqembu leTriangle kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBarbourfields ngoLwesihlanu.
Umqeqetshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthe abafana bakhe bengabe benganqobanga kodwa badlale ngcono kulalokho abakwenze emdlalweni wabo wesibili abawudlale leqembu leHerentals.
Limpumela yomdlalo obuphakathi kwe Highlanders leTriangle itsho ukuba iqembu le Highlanders selilemiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu kuthi ele Triangle lithole umklomelo walo wakuqala selokhu kuqale imidlalo yalonyaka.
Komunye umdlalo weviki lesithathu odlalwe ngoLwesihlanu, iqembu le Shabanie Mine libe ngutshiki lobhanqa 2 ka 2 leqembu leNichrut.
Imidlalo iqhubekela phambili ngeSonto lapho iqembu leHerentals elizadlala khona leqembu le Yadah enkundleni ye Rufaro, iqembu leMutare City lizadibana lele Harare City enkundleni ye National Sports Stadium, ele Bulawayo Chiefs lizadlala lele Chapungu ngase Luveve kuthi ele CAPS United lizangqikilana lele Black Rhinos.
Ngomvulo iqembu leDynamos lizemukela ele Highlanders ngase Rufaro, iqembu le Shabanie Mine lizadlala lele Chicken Inn ngase Maglas, iqembu le Nichrut lizemukela ele Ngezi Platinum ngase Ascot, ele FC Platinum lizadlala lele Bulawayo City ngase Mandava kuthi ele Triangle lizemukela ele ZPC Kariba ngase Gibbo.